"किस्मत २" चलचित्र समिक्षा | Hamro Patro
छवीराज प्रोडक्शनले निर्माण गरेको यो चलचित्र कस्तो बनेको छ त ?
किस्मत-२ चलचित्र समिक्षा - AUDIO कस्तो छ त "किस्मत २"?
सन २००७ मा रिलिज भएको रेखा थापा, आर्यन सिग्देल आदि अभिनीत चलचित्र किस्मतको सिक्वल किस्मत २, दशैंको मौका पारेर आज रिलिज भएको छ । छवी र रेखाको समबन्ध अलि चिसिएको कारणले गर्दा छवीले भने अर्की नायीका शिल्पा पोखरेललाई कास्ट गरेका छन् । दशैंताका रिलिज भएको यो चलचित्रलार्इ अर्को फिल्महरु "सुब्बासाप" र यसअघि नै उत्कृष्ट ब्यापार गरिरहेको "छक्का पञ्जा"ले राम्रो टक्कर दिनेछ । यस्तोमा छवीराज प्रोडक्शनले निर्माण गरेको यो चलचित्र कस्तो बनेको छ त ? आउनुहोस आज यसको समिक्षा तर्फ लागाैं ।
जड्याँहा पिता, सौतनी आमा र दृष्टिविहीन छोरी रहेको परिवारमा एकजना परदेशी आउने यो कथा कुनै पनि हिसाबले नौलो त हुँदैहैन त्यसैले चलचित्र किस्मत २ को कथापनि फरक भने कतैपनि छैन तर यो बाहेक कथाले धेरै कुराहरुलाई समावेश गरेको हुँदा चलचित्र अवधीभरमा यसले दर्शकलाई बोर हुन भने दिंदैन ।
कथा झैं पटकथापनि भिन्न छैन, झन दोश्रो हाफ त पूरै अनुमानयोग्य छ तर पनि पटकथा ठिकठाकै छ । संवादहरु केही खास छैनन, मसालेदार सिनेमामा हुनेजस्तो प्रभावशाली संवाद नभएतापनि चलचित्रमा सामान्य किसिमका संवादहरु छन् ।
डेब्यूट्यान्ट पृथ्वीराज प्रसाइले ठिकठाकै काम गरेको भएतापनि उनको इमोशनल सिन निकै कमजोर छ । किशोर खतिवडापनि रोमान्समा कमजोर लाग्दछन । उनको एक्शन तारिफयोग्य छ तर चलचित्रको भार आफ्नो काँधमा बोकेर चलचित्रकी नायीका शिल्पा प्रस्तुत भएकी छिन । उनको अभिनय निकै स-शक्त छ र उनले आफ्नो कलाकारिता निक्कै मज्जाले देखाएकीछिन, सन्तुलित अभिय गज्जबको छ । चलचित्रको अन्तिम् दृश्यमा उनी भिन्न अवतारमा देखापर्दछिन र त्यतीबेला हलमा ताली र सिठी बज्ने पक्का छ । त्यसबाहेक चलचित्रमा सन्तोष पन्तले जड्याहाँकारुपमा गरेको शिल्पाको बुवाको अभिनय तारिफयोग्य छ । बाँकी सहायक कलाकारहरुको अभिनय पनि राम्रो छ ।
मदन कश्यप घिमीरेको छाँयाङ्कन उत्कृष्ट छ र उनले जोमसोमको दृश्यहरुलाई निकै मज्जाले क्यापचर गरेका छन्, अनन्त थपलियाको संपादन ठिकठाक छ भने दिनेश सुनामको पाश्र्व संगीतले फिल्ममा भरपुर रुपमा ड्रामा भरेको छ । अच्यूत घिमीरेको एनिमेशन अपत्यारिलो छ । अर्जून पोखरेल र दिपक शर्माका गीतहरु निकै उत्कृष्ट छन् । "तिम्रो पिक्चर हिट" र "तिमी आकाशबाट झरेकी अप्सरा" बोलका गीतहरु उत्कृष्ट छन् । कमल राई , किविराज र रामजी लामीछानेको नृत्य पनि राम्रो छ, चलचित्रको कला निर्देशन पनि राम्रो छ । चलचित्र निक्कै रिच देखिन्छ । चन्द्र पन्तको द्वन्द्व ठिकठाक छ ।
ऋषी लामीछानेको निर्देशन राम्रो छ, उनले सिंगल स्क्रिनका दर्शकहरुकालागि एउटा पर्फेक्ट मसाला प्याकेज बनाउन खोजेका छन् र धेरै हदसम्म उनले किस्मत २ लाई अाफ्नो निर्देशनमार्फत् न्याय गरेकाछन् । क्लाइमेक्स अलि मज्जाले प्रस्तुत गर्न सकिने प्रशस्तै ठाँउ थियो तर पनि क्लाइमेक्स फिका लाग्दछ, त्यसबाहेक उनले यो चलचित्रमा ओके काम गरेका छन् ।
किस्मत २ मा केही पृथक काम त भएको पक्कै छैन तर चलचित्र हेर्दा कँही अल्छी पनि लाग्दैन । मल्टिप्लेक्स अडियन्सलाई यो फिल्म नपच्ला तर सिंगल स्क्रिनका दर्शकहरुले दशैंमा यो चलचित्रबाट पूर्ण मनोरञ्जन पाउनेछन् । शिल्पाको उत्कृष्ट पर्फोमेन्सकालागि पनि यो चलचित्र उन्का फ्यानले एकपटक हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
हामी यो चलचित्रलाई कुल ५ मध्य ३ अकं दिन्छौ ।